अस्पताल भर्ना भएका शिवहरि पौडेलको अवस्था कस्तो छ? – hamrosandesh.com
अस्पताल भर्ना भएका शिवहरि पौडेलको अवस्था कस्तो छ?
वरिष्ठ कलाकार तथा निर्देशक शिवहरि पौड्यालको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको कलाकार, निर्माता तथा निर्देशक दिपक राज गिरीले बताएका छन्। अस्पताल भर्ना भएका पौड्याललाई भेन्टिलेटरमा राखिएको भनेर खबर सार्वजनिक भइरहँदा गिरीले उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको बताएका हुन्।
‘मैले हिजो साँझ उहाँसँग नै कुरा गरेको थिए। सास फेर्न गाह्रो भएर आइसियूमा अक्सिजन लगाएको बताउनु भएको थियो, बाहिर खबर आएजस्तो भेन्टिलेटरमा राखिएको हैन,’ गिरीले भने, ‘उहाँलाई खोकी पहिलादेखि नै थियो। स्वास्थ्य सामान्यभन्दा अलि माथि गएको हो। भेन्टिलेटरमा राखेको हैन।’
केहीदिन अगाडि कोरोना भाइरस संक्रमण पोजेटिभ देखिएको पौड्याल नैकापस्थित एपीएफ अस्पताल भर्ना भएका थिए।